URajoy uhambela iCOP22 eMarrakech namuhla | Isimo Sezulu Senethiwekhi
URajoy uhambela iCOP22 eMarrakech namuhla
I-COP22 isebenza ngemuva kokuqala kokusebenza kwe- Isivumelwano saseParis. Njengemihla ngemihla ngikulethela izindaba ngalesi sivumelwano esiyingqophamlando ngokuguquka kwesimo sezulu. Lowo owayengumongameli kaHulumeni waseSpain, UMariano Rajoy, Uhambele eMarrakech ukuhambela i-UN Framework Convention yokulwa nokuguquka kwesimo sezulu. Kungokokuqala aqokwa phesheya selokhu abuyiselwa esikhundleni sokuba yisikhulu esiphezulu.
Isivumelwano SaseParis Sokuguquka Kwesimo Sezulu sasayinwa enhlokodolobha yaseFrance ngoDisemba nyakenye, nokho iSpain asikasifakazeli isivumelwano. Bekungenzeki ngoba iSpain ibingenaye uhulumeni cishe ezinyangeni eziyishumi.
URajoy uhambela umhlangano lapho Amazwe ayi-197 aseyabamba iqhaza. Umbhalo obophezela ngokomthetho futhi ocishe ube ngowendawo yonke, lapho wonke amazwe asekwamukele lokho, azibophezela ukunciphisa ukukhishwa kwegesi engcolisa ukushisa ukuze kuvikeleke amazinga okushisa aphakathi komhlaba ekukhuphukeni kwamadigri amabili.
Siyaphinda siyasho ukuthi inhloso yesiVumelwano saseParis wukukhuluma ngalokhu ukufudumala kwezwe. Wonke amazwe kumele enze iminikelo yokuzithandela ukwehlisa amagesi emkhathini futhi azobuyekezwa njalo eminyakeni emihlanu. Ngaphezu kwalokho, amazwe athuthuke kakhulu kuzodingeka ukuthi axhase lawo angathuthukile kakhulu, ukuze ibhalansi namathuba okukhula komnotho alingane kuwo wonke amazwe asenze isivumelwano.
Ku-COP22 owenzeka eMarrakech, izicelo ezavunyelwana eParis ziyaqhubeka. Ngale ndlela, kwenziwa izindlela ezidingekayo zokwenza isivumelwano sisebenze. Ngaphezu kwakho konke, okulungiswa kakhulu futhi kwasekuqaleni ukwakhiwa kwezinhlelo zolwazi, ngendlela esobala ngokuphelele, ezivumela ukukala imizamo yamazwe yokunciphisa ukungcola.
Uhulumeni waseSpain uyakuqinisekisa ukuthi uzibophezele empumelelweni yalesi Sivumelwano nokuthi uzojoyina ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu. URajoy uzokwamukelwa engqungqutheleni yezulu yiNkosi yaseMorocco, UMohamed VI nangoNobhala-Jikelele we-UN.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » URajoy uhambela iCOP22 eMarrakech namuhla
Ingabe iSupermoon ibangela ama-tsunami?
Indiza iyithinta kanjani imvelo